tatoazy misy dikany - Tattoos Art Ideas
tattoos misy dikany
sonitattoo Jona 23, 2016
Japoney tato ho azy
Ny tatoazy Japone dia malaza amin'ny heviny sy tanjona marobe. Ny tatoazy Japone dia tonga amin'ny endrika sy loko samihafa. Ireo singa izay misolo tena ny tatoazy dia milaza ihany koa ny tantara an'ohatra toy ny trondro Koi sy dragona. Ny dragona dia mifandray amin'ny harena, ny herim-po ary ny tanjaka. Rehefa mahita tatoazy izay maingoka sy mahafinaritra indrindra indrindra ireo, dia voatery hanontany ny dikan'ny tatoazy ianao. Misy tatoazy vitsivitsy izay mahatonga anao te-hijanona sy hangataka ny dikany. Ny iray amin'ireny tatoazy ireny dia ny tatoazy dragona izay misy karazany sy karazany. Ny fomba fanehoana an-tsary ny tatoazy dia hamela anao hankasitraka ny zava-misy fa hafakely sy tsara tarehy.
Ny trondro Koi dia mety amin'ny endrika samihafa amin'ny loko sy loko miaraka amin'ny dikany. Ny olona manao azy io dia milaza fa noho ny tolona ataon'izy ireo amin'ny fampiasany ny ranomainty no ampiasaina, fa ny sasany kosa mampiasa azy io mba hanome toky azy ireo fa ny zavatra rehetra dia mety. Mety midika hoe fisakaizana, fitiavana be fitiavana, fahaleovan-tena, hery, vintana tsara, fiainana lava, fanambinana, fahamendrehana ary fandrosoana. Misy tatoazy betsaka kokoa amin'ny Japoney izay manana dikany lalina sy maharitra izay azonao amboarina.
Tsindrio eto raha hijery ny tatoazy farany amin'ny tatoazy tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny vehivavy no ampiasaina matetika amin'ny molotra mba hiresahana momba ny asa sy ny erogenous. Afaka atao amin'ny loko isan-karazany, fitiavana na loko izy io. Ny molotra mena dia azo ampiasaina hiresahana momba ny fanorohana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo raha toa ka voasokitra ao amin'ireo faritra izay toy ny kibo, ny valizy, ny tendany, sns. Izany dia azo faritana amin'ny faritra maro ao amin'ny vatana izay hamela tarehy boaka. Ny molotra mena izay midika amin'ny fiteny dia azo ampiasaina amin'ny ascultism. Ny molotra mena dia azo ampiasaina hiresahana lohahevitra momba ny erotic sy ny sainy. Resaho koa ireo lohahevitra momba ny taboo izay ahafahanao mifandray amin'izany.
Rehefa misokatra ny vavany, dia azo ampiasaina hiresahana momba ny counterculture. Ny molotra dia ampiasaina hanehoana fifandraisana. Ny molotra dia azo ampiasaina hanehoana ireo olona amin'ny marika amam-pitiavana. Raha vonona ny hampiseho ny fihetseham-ponao ianao na hiresaka amin'ny ambaratonga manaraka, dia azo ampiasaina hilazana ny tantaranao ny molotra.
Tsindrio eto raha hijery farany ny molotra tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Mety ho kely ny tatoavin'ny semisoloka saingy ny dikany dia zavatra goavana. Ny tatoazy dia misarika ny sain'ny maro ary ampiasaina ho toy ny fiankinan-doha, fahaketrahana, fahavoazana ho an'ny tenany, famonoan-tena ary koa ny finiavana hifindra amin'ny fiainana. Ny semikolon dia miresaka momba ny dikan'ny fiainana, mba hanome toky ny olona fa tsy tonga ny farany. Ankehitriny, ny semicolon dia lasa marika famantarana tato ho an'ireo izay sahirana amin'ny fampiasana fiainana mba hampatsiahy ny tenany fa manana zavatra tokony hiainana izy ireo. Misy karazany hafa amin'ity tatoazy ity ary ianao no manapa-kevitra ny amin'ny fomba itiavanao ny paozinao. Amin'ny fiafaran'ny andro, ny semicolon dia maneho zavatra lehibe sy manan-danja izay azonao ankasitrahana.
Tsindrio eto raha hanamarina ny tatoazy farany momba ny tetikasa tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ireo rehetra ireo sy ireo tatoazy maro dia mety hampiasaina amin'ny fanehoana zavatra maro na dia kely aza ny ampahany amin'ny vatany.
Tsindrio eto raha hanamarina ny tatoazy farany momba ny tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny tato an-doha dia tsy hafahafa noho ireo dikany mahafinaritra izay misy azy. Tsy maintsy ho hitanao ny angidina nianjera izay manana ny heviny manokana. Na inona na inona nataon'ilay anjely taminareo, dia mbola manome heviny manokana ianareo. Ny tatoavin'ny anjely dia tsy mitsangana amin'ny zavatra ratsy. Miresaka momba ny fijoroana eo amin'ny fanamby izy ireo na mihetsika mandritra ny fotoan-tsarotra. Ireto ny sasantsasany amin'ireo dikany izay miaraka amin'ny tato anelanelan'ny anjely.
Afaka manana zavatra ifanakalozana amin'ny ara-panahy, fanantenana, Kristianisma, fiarovana, fiarovana, finoana, mpiambina, hery, fahafahana, fanahy malalaka, tsy manan-tsiny, tony, , fahamendrehana sy fahadiovana
Ny hevitry ny anjely dia afaka miova ihany koa amin'ny fomba ampiasain'ny mpampiasa azy. Ny fahamoram-panahy sy ny fiadanana dia afaka misolo tena ny anjely amin'ny vehivavy raha toa ka afaka manamboatra anjely araka izay tiany ny lehilahy. Miaraka amin'ny elatra ireo anjely dia miavaka amin'ny zavatra hafa. Ny anjely dia azo apetraka amin'ny marika rehetra mba hahatonga azy hanana dikany manokana. Rehefa handeha ho an'ny anjomara anjelinao ianao dia ilaina ny manana hevitra havanana amin'ny fandikana ny anjaranao amin'izay tianao holazainao.
Tsindrio eto raha hanamarina ny hevitra farany momba ny tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Tato an-dalamby an-keriny
Ny tato ho an'ny anarka dia maneho ny hery sy ny fahamarinan-toerana. Efa nahita tato an-doko ve ianao? Ity tatoazy ity dia natomboky ny Sumerianina taona maro lasa izay. Ny tatoazy dia lasa iray amin'ireo tatoazy tranainy indrindra eran-tany ary nampiasain'ny Kristianina voalohany. Tamin'izany izy ireo dia nenjehina noho ny finoany. Anisan'izany ny sampan-draharaha misahana ny seranan-tsambo any amin'ny seranan-tsambo toy ny tafika, hery, fiarovana sy fiarovana,
Ny tatoatin'ny vatofantsika dia nampiasaina mba hitantara tantara maro. Nampiasaina hanehoana ny lakroa izy io ary niresaka momba an'i Jesoa Kristy sy ny fijaliany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy koa dia niresaka momba ny herim-batana sy ny lehilahy izay mety hampiasain'ny rehetra. Ankehitriny, ny vatofantsika dia afaka mifangaro amin'ny zavatra hafa mba hanomezana dikany hafa. Ny fampiasana tatoazy an-tsokosoko dia ampiasaina ho fifandraisana vaovao, satria maneho ny fahafaham-po hijanona amin'ny fotoan-tsarotra. Noho ny tsy fisian'ny fanilikilihana loatra momba ny tatoazy ao amin'ny taonjato 21st, ny tatoazy fanorenana dia mibaribary eo amin'ny fiarahamonina mahazatra noho ny dikany sy ny famantarana an'io. Misy tantara iray foana momba ny tato-tsoratry ny vatofantsika izay asiana ny vatany. Izy irery ihany no tompon'andraikitra izay afaka manambara ireo tantara amin'ny hafa.
Tsindrio eto raha hijery ny tatoazy farany momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Tattoo Meaning Tattoo Arrow
Ny Arrow dia fantatra amin'ny anarana hoe Amerikana Amerikana ary nanjary iray amin'ireo antony ilazana ny tatoazy. Rehefa mifampitohy ny zana-tsipìka, dia miresaka momba ny fisakaizana izy ary rehefa azo raisina ho tanjaka izany rehefa miondrika izy. Rehefa mandalo diamondra ny zana-tsipìka iray, dia fantatra amin'ny hoe herimpo izany nefa ny zana-tsipìka irery dia fantatra ho fiarovana sy fiarovana.
Rehefa voasarona amin'ny marika diamondra izy io, dia afaka misolo tena herim-po izy raha mandroso. "Milaza koa izy ireo fa ny zana-tsipìka irery dia maneho fiarovana sy fiarovana amin'ny fahasimbana. Azo ampiasaina ho mariky ny hetsika na fitarihana koa izany. Ny zana-tsipìka dia mety ho mafana ary azo alamina araka ny famaritana ny lamosina. Ny loko, ny endritsoratra ary ny fomba nanosehana azy dia ny mahatonga ny zana-tsipìka tattu ny iray amin'ny tsara indrindra eo amin'ny vatan'ny olombelona. Miaraka amin'ny tattoo arrow, lehilahy na vavy dia afaka manamboatra fikasana tsara mba hijery chic. Baraingo ny zana-tsipìka dimy manondro herim-po, fa ny zana-tsipìka tokana dia mora simba. Baraingo ny zana-tsipìka dia mafy kokoa ny manapaka. Ny soavaly dia fantatra ho loharanon-kery ho an'ireo izay mitady fomba hitantanana ny tahony sy hipoitra amin'ny vahoaka.
Tsindrio eto raha hanamarina ny tsipika farany momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Miresaka momba ny fahasamihafana ara-panahy sy fitiavana ny Butterfly. Izany dia afaka maneho ny psyche sy ny fitiavana, ny faniriana ary ny fitiavany. Ny lolozy dia tena tsara tarehy sy marevaka, izay ny ankamaroan'ny ankizivavy dia maniry foana ny hampiditra azy ao amin'ny vatany. Ny mahazendana sy ny avonavona dia mampisongadina azy rehefa maka sary azy dia mahavariana. Ny asan'ny mpandraharaha iray no manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ny tatoazy.
Tsindrio eto raha hanamarina ny hevitra farany momba ny lolo tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Totozy mamelana felam-boninkazo dia afaka maneho ny fahalemen'ny fiainana ary miresaka momba ny hatsarana ihany koa. Ny vehivavy dia tia izany satria miresaka betsaka momba azy ireny. Fanentanana ho an'ireo vehivavy mitady fomba hitantaràna ny tantarany amin'izao tontolo izao. Rehefa misafidy ny tatoazy marefo ianao, dia miresaka momba ny fitiavam-pitiavana ho an'ny olona sasany izay tokony ho nidonam-pahoriana. Tonga amin'ny endrika sy endrika samihafa izy io ary ankapobeny araka ny kolontsaina izay nanosehana azy. Maro ireo olona tia tatoazy no afaka mampiasa azy io hanehoana zavatra maro.
Ankehitriny, na dia ny lehilahy aza dia manangona an'ity tavy kiriodra mamelana ity mba hampisehoana ny hatsaran'izy ireo rehefa tonga amin'ny fitiavana ny mpiara-miasa aminy. Ary koa mifanaraka amin'ny mpiara-miasa aminy raha miresaka momba ny Luck, ny fitiavana, ny tsy fahampiana, ny fahadiovana, ny hatsaràna, ny fahavitrihana, ny tanjaka, ny adidy, ny fanavaozana, ny fifindra-monina ary ny fivoarana. Ny voninkazo koa dia mitovy amin'ny fanavaozana izay hita amin'ny lohataona. Amin'ny maha-lohataona ny lohataona, ny voninkazo kiriodra dia tandindomin-doza amin'ny fiompiana fambolena, fiarovana ny vokatra ary ny fiverimberenan'ny fiainana aorian'ny ririnina mafy. Ny marika dia zavatra iray hafa mahatonga ny tatoazy ho iray amin'ireo olona tiany indrindra indrindra indrindra amin'ny vehivavy.
Tsindrio eto raha hijery ny totozy farany momba ny totozy momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny olona ho tia tatoazy dia noho ny asehony. Tattoo ny Compass dia manana dikany isan-karazany, fa ho an'ireo izay ao anaty rano kosa, tena sarobidy tokoa izany. Midika izany ny famantarana ny vintana, fiarovana ary fanohanana. Ny tatoazy dia tonga amin'ny karazana sy ny karazany. Misy karazan'ireny tatoazy ireny izay misy fanazavana marobe amin'ny mpampiasa. Ny nofy iray dia iray amin'ireo dikan'ny tatoazy. Tsy voatery mandroso lavitra ianao mba hampahafantarana ny hafa ny fomba fiainanao. Amin'ny alalan'ity tatoazy ity, mora kokoa aminao ny mitantara ny tantaranao tsy misy feo.
Ny sary maneho ny ampahany amin'ny vatan'ny tatoazy dia sahy milaza aminao ny antony nanoratanao ny tatoazy tamin'ny voalohany. Mahazo tari-dalana sy fitarihana izy io, ary koa manamarika ny vintana tsara. Izany no antony ahitan'ny sarivongana maro be eny amin'ny sambo maro be. Ny lazan'ny tatoazy dia zavatra tianao ho tianao rehefa mahita azy ianao. Amin'io andro io dia tsy ireo lehilahy izay mampiasa azy io fa ireo vehivavy izay te-hijery modely.
Tsindrio eto raha hijery ny tatoazy farany momba ny tontoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Inona no dikan'ity tatoazy ity? Olona maro no manana dikany hafa ho an'ny tatoazy dragona. Na izany aza, ny design tattoo mahatalanjona dia mety midika vaovao tsara, vintana, fiarovana ary fanambinana. Mbola misy dikany hafa toy ny majikika, ny saina, ny mpiady, ny fitiavan-karena, ny hery, ny fahavokarana, ny duality, ny fahendrena, ny tanjaka, ny herisetra, ny fahasamihafana ara-panahy, ny fahasambarana ary ny maro hafa.
Misy tatoazy vitsivitsy izay mahatonga anao te-hijanona sy hangataka ny dikany. Iray amin'ireny tatoazy ireny ny dragona dragona izay misy karazany sy karazany. Ny dikan'olon-droa dia tonga amin'ny endrika samihafa rehefa manomboka izany amin'ny vatany. Ny sasany koa dia nanampy loko ho an'ny tatoazy dragona mba hahatonga azy ireo hijery tsara sy hanandrana ny tsirony. Ity tatoazy ity dia azo apetraka amin'ny faritra rehetra ao amin'ny vatana ary mbola hitantara ny tantara fa tokony hatao izany. Ny dikany sy ny hevitry ny tatoazy dia manintona olona maro izay tia tatoazy lehibe.
Tsindrio eto raha hijery ny tato -diky farany momba ny drafitra tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Tattoo ny Elefanta
Ny dikan'ny elefant tatoazy dia manana dikany isan-karazany amin'ny olona samihafa. Ny Elefanta dia midika hoe fiadanana, hery ary hery. Izany dia tandindon'ireo izay mitady fifandraisana, fahendrena, vintana tsara ary fahombiazana. Ny olona sasany dia mihevitra azy io ho fahavokarana ary ny hafa dia toy ny fanoloran-tena, fiheverana, faharetana ary fahadiovam-pitondrantena.
Ny Elefanta dia heverina ihany koa miaraka amin'ny rahona sy ny firoboroboana, ny adidy, ny fahasambarana, ny fahatsiarovana, ny fahavononana ary ny tsy hita. Ireo takelaka elefanta dia tonga amin'ny endriny samihafa. Na izany aza, ny asan'ny mpampiasa dia manapa-kevitra hoe aiza no hapetraka ny tatoazy. Ny olona rehetra tia an'ity tatoazy ity dia manavaka ny dikany ary afaka milaza aminao fotsiny hoe aiza izy ireo no mampiasa ny tatoazy amin'ny toerana izay nosoratan'izy ireo. Ny elefanta dia maneho ny Prosperity, Memory, ?? Happiness, ?? Ambony, ?? Famaritana, tsy misy dikany ary fangorahana.
Ny hery, ny tanjaka, ny fahombiazana, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny reny, ny vintana, ny fahendrena, ny fifandraisana ary ny fandriampahalemana dia sasantsasany amin'ny solonanarana elefanta. Ny elefanta dia anisan'ny zavaboary faran'izay tsara indrindra ahafahanao miditra ao amin'ny vatanao ary manana izany fahatsapana hafahafa izany izay mahatonga anao te haneho ny tatoazy na aiza na aiza misy anao. Azo atao amin'ny toerana iray ny vatana. Misy ihany koa fomba hafa ahafahan'ny elefanta misintona ny vatana.
Tsindrio eto raha hanamarina ny hevitra farany momba ny elefant tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny trondro Koi dia mety amin'ny endrika samihafa amin'ny loko sy loko miaraka amin'ny dikany. Ny olona manao azy io dia milaza fa noho ny tolona ataon'izy ireo amin'ny fampiasany ny ranomainty no ampiasaina, fa ny sasany kosa mampiasa azy io mba hanome toky azy ireo fa ny zavatra rehetra dia mety. Mety midika hoe fisakaizana, fitiavana be fitiavana, fahaleovan-tena, hery, vintana tsara, fiainana lava, fanambinana, fahamendrehana ary fandrosoana.
Ny loko ahatongavan'ny tatoazy dia mamaritra zavatra maro ihany koa. Izany dia maneho ny vintana, ny fitiavana ary ny harena. Azonao atao ny manapa-kevitra ny loko sy ny endriky ny tatoazy. Zava-dehibe ny fampifanarahana, izany no antony ahitantsika ny endrika isan-karazany amin'ny trondro koi amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana. Ny famoronana ny tatoazy dia mahatalanjona fotsiny. Ny voninkazo lotus matetika dia aseho amin'ny tatoazy. Ny lotus manga dia maneho ny fanaraha-maso ny ara-panahy amin'ny ara-batana. Mampiseho fahendrena, faharanitan-tsaina ary fahalalana izany. Ny loto volomparasy dia maneho ny fomba fijery mystika momba ny fivavahana. Ny lotus mena dia miresaka momba an'i Bouddha raha ny loto mena dia miresaka momba ny fo, ny fangorahana ary ny fitiavan-tanindrazana toy ny fitiavana.
Ny trondro Koi ihany koa dia maneho ny fahombiazany sy fomba iray maoderina hifantohana amin'ny fiatrehana olana sy fanamby ho an'ireo mila fanampiana.
Tsindrio eto raha hijery ny farany ny koi trondro koatin'ny tetik'asa ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny latsa-dôma liona dia marefo hatrany amin'ny fijeriny ary miresaka momba ny avonavona, ny herimpo, ny fanoherana ary ny tanjaka. Misy dikany isan-karazany arakaraka ny kolontsaina. Ny liona ihany koa dia midika hoe Purity, Power, Power, Herim-po, Finoana, Adidy, Fiarovana, Fahamarinana, Heranjaka, Fahamendrehana ary Fahefana. Ny dikan'ny lôtô-liona dia tena manan-danja tokoa, izany no antony mahatonga ny olona maro maniry hahafantatra ny dikan'ny zavatra nosoratany. Mahafinaritra ny zavakanto ary afaka manarona ny zavak'ilay vatana na dia ny ampahany bitika indrindra toy ny rantsantanana aza.
Ny fomba fijerin'ny firesaka momba ny liona dia ny mahatonga azy ireny ho anisan'ny tatoazy tsara indrindra. Liona anankiroa izay naseho an-tsehatra indray no milaza amintsika ny momba ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany ary na ny Atsinanana aza tonga hihaona amin'ny Tandrefana. Ny liona dia afaka miresaka momba ny fitarihana ary azo jerena any amin'ny toerana masina na hajaina manerana izao tontolo izao.
Tsindrio eto raha hanamarina teti-kevitra farany momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ireo totozy lotus dia mety ho sarotra ary nahatonga azy ireo hahatalanjona tena mahatalanjona ny tato tetik'adiny. Ny loko amin'ny tatoazy dia manome ny lotus tattoo ny dikany isan-karazany. White lotus dia miresaka momba ny saina sy ny ara-panahy. Miresaka momba ny fahalavorariana sy ny fahadiovana ihany koa izy.
Misy karazana tatoazy maro azonao ampiasaina amin'ny fanovana ny fomba fijerinao. Raiso, ohatra, ny volony izay tonga amin'ny endriny samihafa. Tsy misy ampahany amin'ny vatana izay tsy mifanentana amin'ny. Inona no dikan'ny tatoavin'ny volombava? Maro ny olona manana heviny samihafa. Ny lotus Lotus dia marika mampiseho ny antony mahatonga ny olona mora aleha ho azy ireo indrindra ireo mpivavaka izay mahita dikany be dia be amin'ity tatoazy mahafatifaty ity. Azo atao ny manintona ny trondro koi mba hahatonga azy hanana dikany hafa mahagaga ny fitiavana, ny fahombiazana, ny vintana tsara, ny fahaiza-misakana ny vato misakana ary ny loza koa.
Tsindrio eto raha hanamarina ny tatoazy farany momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny dikan'ny Feather Tattoos
Ny tatoavin'ny tazo dia midika hoe foto-kevitra malalaka satria mifandray amin'ny vorona. Ny biby dia raisina ho bibidia maimaim-poana ary izany no mahatonga azy ireo afaka manidina avy any amin'ny faritra iray manerana an'izao tontolo izao. Ny mpitovo iray na ny volo maro dia afaka miresaka momba ny fitadiavana fahafahana. Ary koa, ny volo dia miresaka ihany koa momba ny singa amin'ny hetsika, hevitra, fahaizana mifandray sy ny fahaiza-mamantatra. Ny volom-borona dia afaka maneho ireo izay efa nodimandry, fifandraisana amin'ny maty.
Tattoos volo ny sasany amin'ireo tatoazy tsara indrindra azonao jerena. Zava-mahadomelina sy manokana. Tsy ny olon-drehetra no hitanao ireo tatoazy ireo. Rehefa mitady tatoazy ianao mba hitadiavana ny fanafahana anao, ity tatoazy ity dia iray ihany mandeha ho azy noho ny hatsarana sy ny dikany. Izy ireo koa dia manolotra fanomezana avy any an-danitra. Ny volony koa dia midika hoe Fahalalahana, Fahamarinana, Fahazavana, Speed, Fiakarana, Fahasahiranana, Fanahy mahery, Dreams, Fahadiovana, Herim-po, Fampanantenana, Fanentanana, Fanantenana, Fifandraisana amin'ny andaniny, Ny fiainana ny fanahy, Travel, Magic, Levitika ary ny tsy fahampian-tsakafo. Ny tatoazy dia tsara tarehy mba hanome anao an'io toetra io izay ilainao. Misy karazana tatoazy maro azonao ampiasaina amin'ny fanovana ny fomba fijerinao.
Tsindrio eto raha hijery ny tato-tato farany tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny tato ho an'ny volony dia ho an'ireo izay tia ny misterin'ny hazavana na ny aloky ny aloka. Ny tato amin'ny Owl dia ampiasaina hanehoana ny sentinely alina sy ny faritra misy ireo zavatra tsy fantatra.
Owl dia maneho fanantenana ao anatin'ny fotoana mampahatahotra na manjombona. Ny fiheverana matanjaka amin'ny vorondolo amin'ny alina noho ny fahitana mahavariana dia mampitombo izany amin'ny olona. Mety midika ho fijoroana ho vavolombelona fa misy hazavana any amin'ny faran'ny tonelina. Ny dikan'ny tatoazy dia hery, majika, nofinofy, mazava, fitarihana, hevitra, fahendrena, fanentanana ary fiarovana.
Midika koa ny fifandraisana Magic, hery ary nofy tsara. Afaka manintona amin'ny endriny maro ny vorondolo ary mamarana amin'ny dikany lehibe izay tianao izy ireo. Ny tato anaty owl dia mety ho fampahatsiahivana ny olona maty ary koa tokony hoe tokony hiaina tanteraka ity fiainana ity.
Ny endriky ny owls koa dia manana ny dikany toy ny sulta vorondolo sûr taloha izay antsoina matetika hoe tatoazy meksikaniana na tato-tavy siramika. Raiso ohatra ny Meksikana tia ny andron'ny tato amin'ny maty noho ny anjara andraikiny. Misy fomba maro samihafa ahafahan'ny olona mampiavaka azy amin'ny vatana. Amin'ny fiafaran'ny andro dia izy no mpizara, izay afaka miresaka mora foana momba izay tato ho ato.
Tsindrio eto raha hanamarina ny tatoazy ho an'ny totozy owl ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Toa Rose Tattoo
Rose mampiseho fitiavana. Ireo izay am-pitiavana dia afaka mamantatra mora foana ny tatoazy. Raha ny tsilo dia tsy misy tsilo, midika izany fa tsy misy fahafoizan-tena hatao rehefa be fitiavana ary avy eo, rehefa misy tsilo, dia midika fa misy sorona hatao. Ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa dia ny dikan'ny raozy ihany koa ho an'ny olona sasany. Ny sasany amin'ireo tantsambo dia mifidy an'ity tatoazy ity noho ny tanjona manokana. Ampifandraisina amin'ny vehivavy ihany koa izy io izay manondro matetika ireo vehivavy manokana izay nijanona nandritra ny dia. Na ireo andriamani-bavy sasany aza dia fantatra amin'ny tatoazy. Afaka ampiasaina koa i Rose mba hiresaka momba ny fandanjana. Vao tsy tapaka ireo andro roses ho an'ny vehivavy.
Ankehitriny, na dia ny lehilahy aza dia manainga ity tatoazy ity mba hampisehoana ny hatsaran'izy ireo rehefa tonga amin'ny fitiavana ny mpiara-miasa aminy. Midika izany fa ny fitiavana, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahaterahana indray, ny ara-panahy ary ny fanahy, ny fanovàna, ny ara-panahy ary ny fanahy, fahasoavana sy firaisana. Ny mahazendana sy ny avonavona dia mampisongadina azy rehefa maka sary azy dia mahavariana. Ny asan'ny mpandraharaha iray no manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ny tatoazy. . Mahafinaritra ny zavakanto ary afaka manarona ny zavak'ilay vatana na dia ny ampahany bitika indrindra toy ny rantsantanana aza. Ny lanja eo an-toerana misy ny tatoazy dia miankina amin'ny fomba fijerin'ny olona izay nisantatra izany.
Tsindrio eto raha hijery ny tatoazy farany momba ny totozy momba ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny tato amin'ny foko dia mampiseho hery na herimpo handresena sakana. Ny dikan'ny foko dia avy amin'ny kolontsaina na toerana na eny an-toerana. Nanomboka tamin'ny andro fahiny ny sasany tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny tatoazy. Ny tato amin'ny foko dia ampiasaina hiresahana momba ny finoana ara-panahy na ara-pinoana. Izy io dia ampiasaina ho tarika na ho an'ny fiarovana. Nampiasaina ihany koa ny tantara milaza fa tsy misy olona afaka milaza afa-tsy ny foko izay avy amin'ny foko tatoazy. Tsy voatery mandroso lavitra ianao mba hampahafantarana ny hafa ny fomba fiainanao. Amin'ny alalan'ity tatoazy ity, mora kokoa aminao ny mitantara ny tantaranao tsy misy feo.
Ny tato-poko dia manana dikany marobe ary afaka midika ho tanteraka. Ny boribory eo amin'ny tatoazy dia miresaka momba ny fahalavorariana sy ny fifandanjana ary koa ny mandrakizay, rehefa mijery ny halaviran-dalana avy eny afovoan-tanàna mankany amin'ny toerana rehetra. Fivavahana maro no mampiasa izany mba hiteny zavatra maro ho an'ny mpino. Ny tatoazy dia mampiseho ny halemem-panahy, ny haja, ny hatsaram-panahy, ny tsy fivadihana, ny fahamarinan-toetra ary ny fahatsoram-po. Ny tatoazy dia ampiasaina ihany koa mba hiresahana momba ny herim-po, ny hery ary ny famokarana. Azo aseho amin'ny zavatra mahalana sy tsy manam-paharoa tahaka ilay orita, koi trondro ary horita hitazona fiarovana, fanampiana ary herim-po.
Tsindrio eto raha hijery ny tatoazy farany momba ny tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Tattoo Wolf Tattoo
Ny tavy Wolf dia azo ampiasaina hiresahana momba ireo mitady ny fahafahana. Ny tatoazy dia midika koa hoe fitiavan-tena sy fanajana, hery ary fahamarinan-toetra. Wolf ihany koa dia midika hoe ala, fianakaviana, fahefana, fikorontanana, fiarovana, fahalalahana, tafahoatra ary maro hafa. . Any Siberia, ny amboadia dia voantso hiaro ny tsy fananan-jaza ataon'ny ankizy - ary indrindra izy io dia entina hanomezana toky ny fiterahana. Tany amin'ny Eurasia taloha, ny amboadia dia mpiaro ny tsiambaratelo. Toa raha nilaza tamin'ny amboadia iray ny tsiambaratelonao ianao, dia nesorinao ny enta-mavesatra entin'ny entana ary ny amboadia dia hiaro mandrakizay.
Ireo olona izay mandeha amin'ny tato amin'ny Wolf dia tsy fehezin'ny fitiavan-tanindrazana satria mino ny hevitra. Ny fitiavana dia mampiditra an'ity tatoazy ity mba hampisehoana ny heriny. Ny amboadia dia heverina ho mpiaro ireo maty. Izany no mahatonga azy ireo matetika hita any amin'ny fasana na fasana.
Ny tontolon'ny tavy dia azo jerena any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao ary misolo tena zavatra maro koa izy ireo. Ny fiovan'ireto tatoazy ireto dia mahatonga azy ireo ho tsy mahazatra. Misolo tena azy ireo
Herisetra herim-po, hery, fanindrahindrana, lozisialy sy adidy, loza sy fandringanana, angovo, fiarovana ary ny fitandremana, ny fitarainana ary ny fahaiza-manaon'ny firaisana ara-nofo. Izany no mahatonga ny olona maro mampiasa azy io.
Tsindrio eto raha hanamarina farany ny tetikasam-panamboarana tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
moon tattoostato ho an'ny vatofantsikatattoos mahafatifatykoi fish tattoocat tattoosrip tattoosloto voninkazomasoandro tatoazytattoos rahavavycompass tattootattoos foottratra tatoazylion tattoosAnkle Tattooselefanta tatoazytattoostattoos backdiamondra tattooeagle tattoostattoos ho an'ny lehilahyarrow tattootattoos sleeveTatoazy ara-jeometrikanamana tattoos tsara indrindratattoo cherry blossomanjely tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoo infinitymozika tatoazytattoos mpivadyraozy tatoazytattoos armNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo eyetattoo octopustattoostatoazy fokotatoazy lolotatoazy voninkazomehndi designtattoo watercolorhenna tattooscorpion tattootattoos crosstattoos voronatattoo ideasfitiavana tatoazytanana tatoazyHeart TattoosTattoo Feather